Ngaba amadoda akwaGemini anomona kwaye ayathwala? - Ukuhambelana
Eyona Ukuhambelana Ngaba amadoda akwaGemini anomona kwaye ayathwala?
Umqondiso ngeyona charisma, indoda yaseGemini iyayithanda ngendlela eyahlukileyo. Ngaba kunokwenzeka ukuba abe nomona ngamanye amaxesha? Ayinamsebenzi isini sendalo, iGemini luphawu lwe-zodiac olune-aura ekhethekileyo.
Bangabantu abathanda iincoko ezinomdla kwaye abakwaziyo ukuzisa uncumo ebusweni bomntu nokuba imeko ithini na.
Ngaba i-aries iyakopela kwaye iyaxoka
Inomdla kwaye ihlala inethemba, indoda yaseGemini izimele xa kufikwa kuthando nakwezothando. Akayiqondi indlela abanye abalibona ngayo ngokwahlukileyo ihlabathi kwaye esi simo sengqondo sihambelana ngokugqibeleleyo. Amandla aveliswa yindoda yaseGemini yeyona nto yenza ukuba abantu batsaleleke kuye.
Ukuba luhlobo oluzimeleyo, akunakulindeleka ukuba indoda yaseGemini ibe nomona ngokulula okanye ibe nezinto. Akayi kuphinda akhathaze iqabane lakhe ngezinto ezinjalo njengoko yena ngokwakhe ethanda ukushiywa ukuba azulazule ngokukhululekileyo.
Nangona kunjalo, ukuba uyabona ukuba indoda yaseGemini ikujonga ngakumbi, oko kuthetha ukuba inokuba neemvakalelo ezithile ngawe.
loluphi uphawu ngo-Epreli wama-28
Kuyinyani ukuba ngamanye amaxesha unokuba nezinto naye, kodwa ngendlela yakhe, eyahlukileyo.
Umzekelo, ebengathandi ukuba iqabane lakhe lichithe ixesha elininzi nomnye umntu. Uya kuzikhathaza kwaye angabinakuzinceda ekubuzeni iqabane ukuba bayaphi, okanye nabani.
Kuya kufuneka uqonde isimilo sakhe esintsonkothileyo, ukuba ufuna ukuba kunye nendoda yaseGemini. Ulawulwa yiMercury, eyiplanethi yobukhulu namandla, le ndoda ihlala ikulungele ukujongana nemiceli mngeni emitsha ngentshiseko.
Ngokuqinisekileyo unokubuza ngokwakho ukuba kutheni umntu onomtsalane ongaka enokuba nomona kwaye kutheni abanye bengenamona ngaye. Ewe, eyona nto abantu bayayikhweletela indoda yaseGemini.
Kubonwa ngaphandle, indoda yaseGemini ibonakala ngathi inayo yonke into eyifunayo ngaphandle kokuzabalaza. Cofa kuTwitter
Kodwa yile nto, kuphela ngaphandle ngaphandle kwendoda yeGemini inokuba ngumntu omnye ngokupheleleyo. Abantu abazalelwe eGemini baziwa ngokuba nobuso obubini kunye nokutshintsha kwemood.
Ukuba ukunye nendoda yaseGemini, mhlawumbi sele uyazi ukuba lo mfo akanamona kwaphela okanye akanamali. Akaze azame ukuba ngumntu amthandayo kwaye waziwa njengomthandi wenkululeko.
ndiluphawu olunjani ukuba ndizalwe ngoJanuwari
Njengokuba kunjalo, wayengenakuba nomona ucinga ukuba uyakuthanda ukudlala ngothando kunye nokuthimba ingqalelo yomntu wonke kumatheko nakwiindibano.
Akunakulunga ukuba atyhole iqabane lakhe ngokudlala ngothando ngelixa enobungane kuye wonke umntu. Ukuba ukunye nomntu kungenxa yokuba uyamthemba loo mntu kwaye ngenxa yesi sizathu akanakukhathazeka ngengxoxo emnandi iqabane lakhe elinokuba nalo nomnye umntu.
Umona ngendoda eGemini ligama elingaziwayo. Akayithandi idrama nayo, ngoko awusoze umbone esenza umboniso.
indlela yokuthandana nomfazi wepisces
Ungazami ukuvusa umona wakhe kuba awuzukusebenza. Uza kumcaphukisa qha hayi lomntu ubuzama ukummonela.
Indoda yaseGemini iya kuzikhusela xa ibuthathaka. Angathanda ukuphelisa ubudlelwane kwaye angabonakali ebuthathaka emehlweni eqabane. Unokothuka ngokutshintsha isimo sakhe sengqondo sikhululekile kumona.
Umona weGemini: Into ekufuneka uyazi
Iimpawu zeNdoda yaseGemini kuThando, uMsebenzi kunye noBomi
I-Rooster Man Rat Woman ixesha elide ukuhambelana
IVenus eLibra: Iimpawu eziPhambili zoBuntu kuthando nakuBomi
8/25 uphawu lweenkwenkwezi
taurus indoda virgo umfazi ukulwa
uphawu lwe zodiac lwangoNovemba 28
Uphawu lweZodiac ngoJulayi 11
Uphawu lweZodiac lwangoFebruwari 21
loluphi uphawu nguJan 10